Njikọ vidiyo site na Ngwaọrụ | Martech Zone
Njikọ vidiyo site na Ngwaọrụ
Friday, December 30, 2011 Tọzdee, Disemba 29, 2011 Douglas Karr
Na vidiyo na-aga n'ihu ịrị elu, ị nwere ike iche na omume adịghị iche nke ukwuu site na ngwaọrụ gaa na ngwaọrụ. Agbanyeghị, enwere ihe akaebe na-abụghị eziokwu. Ooyala wepụtara akụkọ nke otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nyochare omume ikiri n'etiti otu narị nde ndị ọrụ ya. Wistiya weputara ihe omuma a nke na egosiputa nchoputa data.
Tags: omume vidiyodesktọọpụ vidiyovideo laptọọpụvideo mkpanakambadamba vidiyona-ekiri vidiyo
Amụma afọ 2012 site na Uru